डेब्युमै गुर्बजले कीर्तिमान बनाउदा अफगानिस्तानद्वारा आयरल्याण्ड पराजित – WicketNepal
WicketNepal Staff, २०७७ माघ ८, बिहीबार २०:४८
पहिलो एकदिवसीयमा आयरल्याण्डमाथि १६ रनको जित निकाल्दै युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) मा जारि ३ खेलको एकदिवसीय शृंखलामा अफगानिस्तानले अग्रता लिएको छ।
आबु धाबी स्थित शेख जायद स्टेडियममा सम्पन्न खेलमा २८८ रनको लक्ष्य पछ्याएको आयरल्याण्डले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर २७१ रनमात्र बनाउँन सक्यो। आयरल्याण्डको ब्याटिंगमा लॉर्कन टकरले सर्वाधिक ८३, कर्टिस केम्फरले ३९ तथा पौल स्टर्लिङले ३९ रन बनाए।
खराब सुरुवात गरेको आयरल्याण्डले ओपनर केभिन ओ’ब्राइनलाई १ तथा कप्तान एंड्रयू बलबिरनीलाई १५ रनको व्यक्तिगत स्कोरमा गुमायो। त्यसपछि अर्का ओपनर पौल स्टर्लिङले हेरी टेक्टरसँग ५० रनको अर्धशतकीय साझेदारी गरे। टेक्टर (२८) र स्टर्लिङ (३९) लगातर आउट भएपछि कर्टिस केम्फर र लॉर्कन टकरले पाचौं विकेटको लागि ८६ रनको साझेदारी गर्दै आयरल्याण्डको इनिंग उकासे। ५३ बलमा ३९ रन बनाएका केम्फरलाई मुजिब उर रहामानले पेभेलियन फर्काए।
त्यसपछि टकरसँग सातौँ विकेटको लागि ४३ रनको साझेदारी गरेपछि सिमि सिंह २३ रन बनाएर आउट भए। ९६ बलमा समान ३ चौका र ३ छक्काको मद्धतमा ८३ रन बनाएका टकरलाई राशिद खानले स्टम्प आउट गराउँदै अफगानिस्तानको जित सुनश्चित पारे।
Lorcan Tucker falls foracareer-best 83!
Whatabrilliant innings! Afghanistan are favourites now.#AFGvIRE Scorecard: https://t.co/YEdZPkvUPi
📸 @AbuDhabiCricket pic.twitter.com/ma7gteLvok
अफगानिस्तानको बलिंगतर्फ नवीन उल हकले (९-०-६८-३) सर्वाधिक ३ विकेट लिए। राशिद खान र मुजिब उर रहमानले समान २ तथा गुल्बादीन नैब र मोहम्मद नावीले समान १ विकेट हात पारे।
डेब्युमा शतक बनाउदै गुर्बजको कीर्तिमान
यसअघि टस जितेर ब्याटिंग रोजेको अफगानिस्तानले निर्धारित ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर २८७ रन बनाएको थियो। उसको लागि ओपनर ब्याट्सम्यान (डेब्युटन्ट) रहमनुल्ल्लाह गुरबजले १२७ बलमा ८ चौका र ९ छक्काको मद्धतमा सर्वाधिक १२७ रन बनाए। उनि एकदिवसीय डेब्युमा शतक बनाउने पहिलो अफगानी क्रिकेटर बनेका छन्। यस्तै राशिद खानले विस्फोटक ब्याटिंग गर्ने क्रममा मात्र ३० बलमा ५५ रनको अर्धशतकीय पारि खेले।
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय डेब्युमा शतक बनाउने गुर्बज विश्वकै दोश्रो कान्छो उमेरका पुरुष क्रिकेटर बनेका छन्। गुर्बजको उमेर १९ वर्ष ५४ दिन रहेको छ। पाकिस्तानका सलिम इलाहीले १९९५ मा श्रीलंका बिरुद्ध १८ वर्ष ३१२ दिनको उमेरमा डेब्यु गर्दै शतक बनाएर यो कीर्तिमान अझै आफ्नो नाममा राखेका छन्। गुर्बजले हिर्काएको ७ वटा छक्का भने एकदिवसीय डेब्युमा कुनै पनि खेलाडीले हिर्काएको सबैभन्दा धेरै छक्का हो।
That’s one way to announce yourself on to the international stage 👏#AFGvIRE pic.twitter.com/KWMJlpnBHL
ओपनरद्वय गुरबज र जावेद अहमदीले पहिलो विकेटको लागि १२० रनको शतकीय साझेदारी गरे।अहमदीलाई ३८ रनको व्यक्तिगत स्कोरमा एंडी मैकब्राइनले आउट गरेपछि आयरल्याण्डको बलरहरु खेलमा हावी भए। अफगानिस्तानले ४१ रनको अन्तरालमा ४ विकेट गुमाउँन पुग्यो। एक किनारबाट विकेट गुमाएता पनि ओपनर गुरबजले शतकीय पारि खेल्दै अफगानिस्तानको इनिंग सम्हाले। उनलाई गेराथ डिलेनीले पेभेलियन फर्काएपछि अफगानिस्तान दबाबमा पर्यो।
अन्तिममा आठौँ विकेटको लागि राशिद खानले नजीबुल्लाह जद्रानसँग ४९ रनको साझेदारी गर्दै अफगानिस्तानलाई सम्मानजनक योगफलतर्फ डोर्याए। जर्दानले ४३ बलमा समान १ चौका र १ छक्काको मद्धतमा २९ रन बनाए। आक्रामक पारि खेलेका राशिद अन्तिम ओभरको पाचौं बलमा रन आउट भए।
आयरल्याण्डको बलिंगतर्फ एंडी म्याकब्राइनले सर्वाधिक ५ विकेट (१०-०-२९-५) लिए। ब्यारी म्याकार्थी, सिमी सिंह र गेराथ डिलेनीले समान १ विकेट हात पारे।
शृंखला अन्तर्गत दोस्रो एकदिवसीय २४ जनवरीमा तथा अन्तिम (तेस्रो) एकदिवसीय २६ जनवरीमा खेलिनेछ। यसअघि १८ जनवरीबाट सुरु हुने तालिका रहेको तिन खेलको एकदिवसीय शृंखला भिसामा ढिलाई भएको कारण धकलिएको थियो।